“Lautaro Martínez waa weeraryahan cajiib ah” – Lionel Messi – Gool FM
Dajiye May 15, 2020
(Barcelona) 15 Maajo 2020. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa sheegay in Lautaro Martínez uu yahay weeraryahan cajiib ah, isla markaana uu kaga shabaho Luis Suarez dhowr astaamo oo dhanka farsamada ah.
Dhinaca kale Lionel Messi ayaa xaqiijiyay inuusan waxba ka aqoon wadahadalada u dhexeeya kooxaha Inter Milan iyo Barcelona ee ku aadan heshiiska Lautaro Martínez.
Lautaro Martínez ayaa ah xiddiga koowaad ay bar-tilmaameedka ka dhiganeyso kooxda kubadda cagta ee Barcelona suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda, si ay kaga soo dajiso garoonka Camp Nou.
Haddaba Lionel Messi ayaa wareysi gaar ah uu ku bixiyay wargeyska “Sport” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay:
“Lautaro Martínez waa weeraryahan cajiib ah oo dhameystiran, wuxuuna la mid yahay Luis Suarez marka loo fiiriyo sida wanaagsan ee loola dhaqmo jirkooda iyo habka ay u kontaroolaan kubadda iyo sida ay u dhaliyaan, waxaa jira waxyaabo ay isku mid ka yihiin”.
“Si aan runta kuugu sheego, ma hubo inay jiraan wada hadalo ku aadan Lautaro Martínez, wax fikrad ah kama haysto, waa inaan aragnaa waxa ugu dambeyntii dhici doono isaga iyo magacyada kaleba”.
“Qaar ka mid ah mas’uuliyiinta kooxda ayaa mas’uul ka ah inay doortaan ciyaartoy ku habboon kooxda, balse aniga ma jiraan wax shaqo ah ee aan ku leeyahay arrintaas”.
Lothar Matthäus oo sheegay waxa uu Håland u baahan yahay kahor inta uusan ku biirin Real Madrid